सफा अनि कोमल अनुहार चाहानु हुन्छ ? यी घरेलु तरिका अपनाउन सकिन्छ – Bannigadhi Today
सफा अनि कोमल अनुहार चाहानु हुन्छ ? यी घरेलु तरिका अपनाउन सकिन्छ
एकेन्द्र खत्री २०७७ माघ १४, बुधबार १३:१०
अधिकांश मानिसहरुले आफ्नो अनुहार सफा गर्नका लागि साबुन या फेसवासको प्रयोग गर्ने गरेका छन। तर यी रसायन मिस्रित फेसवास या साबुनले मुख धूनाले यसले छालामा नकारात्मक असर पुर्याउन पनि सक्छ। जसले त्वचालाई रुखो बनाउन सक्छ । यसको अत्यधिक उपयोग गर्नाले उमेर नै नपुगी छाला चाउरिने समस्या देखिन सक्छ ।
अनुहारको सफाईका लागि साबुनको ठाउँमा तल उल्लेख गरिएका घरेलु उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
त्वचाको सफाईको लागि काचो दुधको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। यसको प्रयोगले मरिसकेका डेड स्किनको सफाई गर्नुका अतिरिक्त त्वचालाई पनि थप चम्किलो र आकर्षक पार्न सहयोग गर्दछ । यो एक नेचुरल क्लिजर हो।
५। नरिवलको तेल
अनुहारमा नरिवलको तेलको प्रयोग गर्नु पनि अति नै लाभदायक छ। यसले छालाको भित्र सम्म पुगी काम गर्ने भएकाले पनि कुनै पनि समस्या आउन बाट रोक्छ। अनि छाला लाई कोमल बनाउन सहयोग गर्दछ ।